Semalt Expert avy any Islamabad: Ahoana no hanakanana ny Spam momba ny Google Analytics?
Ny adihevitra momba ny spam dia olana lehibe ho an'ny webmasters sy ny mpivarotra amin'izao andro izao. Manaraka ny kaontinao Google Analytics izy io, manova ny tena fitsidihany ary mamoaka ny angona ilaina amin'ny endriny. Misy fiantraikany vaovao momba ny spam referrer dia nanimba ny kaonty Google Analytics samihafa ary namoaka ny tatitra momba ny fifamoivoizana noho ireo toetra samihafa.
Soa ihany fa azo atao ny manakana ny spam referrer ao amin'ny kaontinao Google Analytics - hilotrons fisher price. Alefaso any amin'ny toro-hevitra avy amin'i Sohail Sadiq, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt .
Mitsidika ny tranonkalanao ny spam referrer ary mamela ilay pejy iray ao anatin'ny segondra, noho izany dia 100% ny taham-pidirana. Ny Spammers dia mandefa spam referre ho marobe ary mampiasa teknika maro mba handefasana fifamoivoizana mivantana amin'ny tranonkala manokana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa ny paikady referrer dia mikendry ny handefasana fifamoivoizana amin'ny kalitaon'ny tranonkala fahatelo sy ny fitsidihana tsy misy vidiny amin'ny bilaoginao na tranokala. Ny fampahalalana referrer dia apetraka amin'ny programa, rindrambaiko, ary navigateur samihafa, ary mety ho vita ary mora azo. Ireo mpitsikilo dia mandefa fifamoivoizana sandoka amin'ny tranonkalanao ary mamela fahatsapana fa misy olona vao avy namaky ny votoatiny. Vokatr'izany dia mamorona amina rohy mankany amin'ny pejiny izy ireo
Ny tatitra Google Analytics dia tsy azo idirana ampahibemaso, fa ny spamera dia mahafantatra ny idiran-taratasinao ary manomboka mandefa fifamoivoizana sandoka. Ankoatra ny fanamarihana ID izy ireo, izy ireo dia mihevitra ny tenimiafinao manokana sy WordPress antsipiriany momba ny vohikala olon-droa sy bilaogy. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina handefa fitsidihana diso amin'ny toerana marobe.
Mitahiry spam momba ny kaonty Google Analytics
Mandehana any amin'ny Acquisition >> All Traffic >> sehatr'asa referrals ao amin'ny kaonty Google Analytics anao. Raha hitanao ny rohy mampiahiahy na tranokala eto, ny vintana dia ny sambokely no nahatratra ny tranokalanao ary mila Raha toa ka azo atao ny mividy tranokala, dia mety ho mora kokoa amin'ny tranokalanao ny mpandika lalàna, fa ny taham-pitenenana dia tokony ho ambany noho izay azo atao.
Ny tanjona dia ny hamerenana amin'ny fomba ofisialy ny votoatin'ny tranonkala, raha tsy manakana anao hikaroka zavatra vitsivitsy ianao. Mampalahelo fa tsy afaka manakana ny spam ara-tantara ianao, fa afaka manatsara ny fitantanana ny tranonkalanao amin'ny ankapobeny.
Ny fomba voalohany hanakanana ny spam referrer dia ny hanao lisitr'ireo mpitsoa-ponenana ratsy ary manasaraka azy ireo indray mandeha. Na dia manova ny toerana misy azy sy ny fananany amin'ny fotoana aza izy ireo, dia afaka manampy azy ireo hatrany amin'ireo mpamatsy vaovao mba hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny tranokalanao. Raha efa nosakananao izy ireo indray mandeha dia tsy maintsy manakana azy ireo koa ianao amin'ny ho avy, mifototra amin'ny IPs ampiasain'izy ireo handefa anao fifamoivoizana sandoka. Noho izany, mankanesa ao amin'ny Sampan-draharahan'ny >> Technology >> Network ao amin'ny kaontinao Google Analytics ary mamoròna marika maro araka izay azo atao.
Tokony hotadidinao fa ny ankamaroan'ny fifamoivoizana amin'ny spam dia eo ambanin'ny anaranao eo amin'ny sehatra, anarana ekena marina, na ny anaran'ny mpampiasa SEO iray. Na ahoana na ahoana, dia manimba ny tranokalanao izany ary tokony hesorina tsy ho ela araka izay azo atao. Ny sasany amin'ireo tranonkala izay tsy tokony adino ny manampy amin'ny sivanao dia SEOThing.co.uk, Googleweblight.com, ary Googleusercontent.com.
Azo atao ny manala ny spam amin'ny alàlan'ny tatitra misy anao. Raha manamarina ny tatitra misy anao ianao, dia mety hahita sombin-javatra manokana izay mila esorina haingana araka izay tratra. Mandehana any amin'ny fizarana Segment amin'ny kaonty Google Analytics ary kitiho ny safidy vaovao Segment. Eto dia azonao atao ny manamarina raha toa ka tsy misy adiresy na tsia ny tatitra misy anao. Raha tsy izy ireo, dia azonao atao ny mampiditra ny fehezan-dalàna manokana ao amin'ny rakitra .htaccess ary alao ny spam rehetra rehetra